अस्पतालमा बिरामी, क्लिनिकमा डाक्टर – www.agnijwala.com
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार १३:२४
बुटवल । सोमबार बिहान ११ बजे। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्त्री तथा यौन रोगको ओपीडी अगाडि ठेलमठेल भीड छ। गर्भवती र अन्य महिला तथा पुरुषहरू चिकित्सकको पर्खाइमा छन्। त्यही भीडमा उभिएकी छन्, बुटवल जानकीनगरकी गीता बोहोरा। उनी अस्पताल आएको दोस्रो दिन हो। आइतबार गर्भ परीक्षणका लागि आएकी उनको एक्सरे रिपोर्ट डाक्टरले हेर्न भ्याएनन्। अनि सोमबार बिहान १० बजे नै अस्पताल पुगेकी हुन्।
अघिल्लो दिन बिहान साढे ६ बजे अस्पतालमा आएर टिकट काट्ने लाइनमा उभिनु परेको थियो। जेठाजु टेकबहादुर बोहोराले टिकटको लाइनमा बस्न बिहानै छोरीलाई पठाए। ११ बजेपछि डाक्टर आउँछन् कि भन्दै कुरेका उनीहरूले आइतबार दिनभरिमा पनि एउटा एक्सरे गरेर देखाउन पाएनन्। ‘लाइनमा बसेर रिपोर्ट देखाउँदा देखाउँदै भोलि भनेर डाक्टर निस्किए, आज (सोमबार) पनि १० बजेबाटै कुरेका छौं कोही आएका छैनन्’, उनले भने। साढे ११ बजे ढोकामा रहेको नेमप्लेटमा डा. शीला क्षेत्री र डा.हसिना बनु भित्र लेखिएको थियो। तर उपचार सुरु भएकै थिएन। प्रसूतिका केही डाक्टर निजी क्लिनिकमै व्यस्त थिए।
अस्पतालमा सामान्यतया चिकित्सकहरूले ५ घण्टा समय दिनुपर्छ। तर अधिकांश डाक्टर ३ घण्टा पनि मुस्किलले अस्पतालमा बिताउँछन्। सोमबार साढे ११ बजेसम्म अस्पतालको ओपीडीमा नाक, कान, घाँटीरोग विशेषज्ञ डा. विष्णु शर्मा, बालरोग विशेषज्ञ डा। मनोज कुशवाहा, न्युरोमा डा. सञ्जीवकुमार शाह मात्रै थिए। जनरल फिजिसियन वार्डमा डा। पुष्पराज जोशी र डा. दिनेश गौतम मात्र उपस्थित थिए। उक्त वार्डमा ७ जना डाक्टरको नेमप्लेट झुन्ड्याइएको थियो। बिरामीले ठेलमठेल रहेको मेडिसिन वार्डमा साढे ११ बजेसम्म जम्मा १७ जना बिरामीले परीक्षण गराएका थिए।
डाक्टरले परीक्षण गरेपछि पैसा बुझाउनका लागि अस्पतालमा अर्को लाइन लाग्नुपर्छ। त्यो लाइन पनि टिकट काट्नेभन्दा सानो हुँदैन। एउटा काउन्टरबाट मात्र पैसा बुझ्दा धेरै बिरामीले रगत परीक्षण लगायतका काम गराउनै पाउँदैनन्। परीक्षणको शुल्क तिर्ने समय १२ बजेसम्म मात्रै हुन्छ। डाक्टरहरू नै समयमा नआएपछि पहिलो दिन स्वास्थ्य परीक्षण गर्दैमा सकिन्छ। दोस्रो दिन मात्र बिरामीले डाक्टरलाई ल्याब टेस्टको रिपोर्ट देखाउन पाउँछन्। ‘बिरामी भएको मान्छे कति दिन अस्पताल धाउने ? ’, पैसा तिर्ने लाइनमा बसिरहेका गुल्मीका छमबहादुर छन्तेलले भने, ‘दुई/तीन वटा काउन्टर बनाए त यस्तो लाइन लाग्नुपर्दैनथ्यो नि।’
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालका अनुसार अस्पतालमा डाक्टर आउने समय बिहान १० बजे हो। उनीहरूले कम्तीमा दिउँसो ३ बजेसम्म बिरामीको परीक्षण गर्नुपर्छ। तर अस्पतालमा त्यसको ठीक विपरीत अभ्यास हुँदै आएको छ। १२ बजे अस्पताल पसेका डाक्टरहरू २ नबज्दै निजी क्लिनिकमा पुग्छन्। खनालले कतिपय डाक्टर अध्ययनमा, राउन्डमा हुने भएकाले १० बजे नै ओपीडीमा नदेखिने बताए। ‘आज (सोमबार) त गाइनोको बाहेक अरु डाक्टरहरू हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने।
कर्मचारीहरूका अनुसार अस्पताल प्रशासनकै कारण बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. खनालले सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप छ। तर सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले उनैलाई ‘काखी च्याप्ने’ गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। मेसुको निष्क्रियताले डाक्टरदेखि कर्मचारीले मनलाग्दी गर्दै आएका हुन्।
प्रदेश ५ भरिका अस्पतालमध्ये सबैभन्दा बढी विशेषज्ञ डाक्टरहरू यो अस्पतालमा छन्। उपकरण र शड्ढयासमेत सबैभन्दा धेरै छन्। तर बिरामीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।